डेटा स्क्रैपिंग मेड आसान द्वारा Semalt
वेब स्क्रैपिंग व्यवसाय र मार्केटिंग योजना मा आवश्यक डिजिटल प्रक्रिया बन्यो. आज उद्योगहरूले मिनेट भित्रको डेटा एकत्रित गर्न र तिनीहरूको लक्ष्य हासिल गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी तरिकाहरू खोज्ने प्रयास गर्न चाहन्छ. Chrome बाट वेब स्क्रैपर विस्तार एक उत्कृष्ट समाधान हो र यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई अद्भुत उपकरण र नतिजा प्रदान गर्दछ. प्रयोगकर्ताहरूले यो सफ्टवेयर कार्यक्रम प्रयोग गर्न कुनै पनि कम्प्यूटर कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग कुञ्जीहरू आवश्यक पर्दैन - applications attendance management system.
वेब स्क्रैपर एक्सटेन्सन
वेब स्क्रैपर Сhrome ब्राउजर को लागि विशेष रूप देखि वेब डेटा स्क्रैपिंग को लागि एक एक्सटेन्सन हो।. तपाइँ एक वेबसाइट कसरी नेविगेट गर्न र निकाल्न डेटा निर्दिष्ट गर्न योजना (साइटमैप) सेट अप गर्न सक्नुहुनेछ. स्क्रैरले सेटअपको आधारमा वेबसाइटलाई पछ्याउनेछ र सान्दर्भिक डेटा हटाउनेछ. यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई विशेष ढाँचामा निकालेको डाटा निर्यात गर्न दिन्छ. यसले बहु पृष्ठहरू पनि स्क्रैप गर्न सक्छ. यो किन एक धेरै शक्तिशाली उपकरण हो. यसले अाक्स्याक्स र जाभास्क्रिप्ट प्रयोग गर्ने गतिशील वेब पृष्ठबाट डाटा पुन: प्राप्त गर्न सक्छ. एक विशेष वेबसाइटबाट धेरै पृष्ठहरू परिच्छेद गर्न प्रयोगकर्ताहरूलाई चित्रण संरचना बुझ्न आवश्यक छ. उदाहरणका लागि, यदि तिनीहरू नयाँ पृष्ठमा स्विच गर्न चाहनुहुन्छ भने, उनीहरूलाई URL को अन्त्यमा मात्र नम्बर परिवर्तन गर्नुपर्छ. एकै समयमा, तिनीहरू स्वचालित रूपमा धेरै पृष्ठहरू स्क्रैप गर्न एक साइटमैप बनाउन सक्नुहुन्छ.
वेब खोजीकर्ताले यो उपकरण प्रयोग गर्दा साइट र मेरो सापेक्ष डाटा नेभिगेट गर्न सक्षम हुनका लागि साइटमैपहरू निर्माण गर्न सक्दछ।. विभिन्न छनौटहरू प्रयोग गरेर, वेब स्क्रेपर वेबसाइटलाई सूचीमा सूचीबद्ध गर्न सक्दछ, केही सूचीहरू, जस्तै सूचीहरू, छविहरू, सामग्रीहरू, र तालिकाहरू. विशेष गरी, एकपटक खरगोशले वेबसाइटबाट एक पृष्ठ खोल्छ, प्रयोगकर्ताले केही तत्वहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ. त्यसो गर्न, तिनीहरू 'स्क्रैप' चयन गरेर साइटमैपमा क्लिक गर्नु पर्छ।. यदि तिनीहरू बीचको प्रक्रिया रोक्न आवश्यक छ भने, तिनीहरूसँग यो सञ्झ्याल बन्द गर्नुपर्छ, र तिनीहरूले निकालेको डेटा राख्न सक्छन्. त्यसपछि, स्क्रैप गरिएको डेटा CSV ढाँचाको रूपमा निर्यात गर्न सकिन्छ.
यो डेटा स्क्रैप आर धेरै सरल, कुशल, र बलियो निकासी उपकरण हो. यसले केहि फाइदाहरू प्रदान गर्दछ, जस्तै डाटा निष्कर्षण जुन डेटा संरचनाहरू पढ्न सक्छ, जस्तै सम्पर्क सूचीहरू, मूल्यहरू, उत्पादनहरू, इ-मेलहरू र थप स्वचालित रूपमा.
परिष्कृत को प्रयोग गरेर बहु ​​पृष्ठहरु लाई स्क्रैपिंग
प्रयोगकर्ताहरु लाई उनि लिपटे भएका सबै भन्दा राम्रो तरीका सम्भव गर्न को लागी केहि महान प्रविधिहरु लाई परिष्कृत गर्दछ. बहुविध वेबपृष्ठहरूबाट जानकारी निकाल्न हामी दुई-चरणको प्रक्रिया प्रयोग गर्नेछौं:
पहिलोपटक, हामी स्क्रेपर एक्सटेन्सनका साथ वेब-पृष्ठहरूको सबै URL हरू प्राप्त गर्नेछौं। त्यसोभए, हामी यी वेब पेजहरु को जानकारी को परिष्कृत को प्रयोग गरेर निकाल देंगे. यदि वेब पृष्ठहरूले अन्य समान पृष्ठहरूको लिङ्क प्रदान गर्न डेटा सङ्कलन गर्न चाहानुहुन्छ, वेब खोजीकर्ताले अर्को पृष्ठमार्फत पछाडि पछ्याउन प्रयोग गर्न सक्दछ।. प्रयोगकर्ताहरुले पनि विभिन्न वेबसाइटहरु लाई paginate र क्रल गर्न सक्षम हुन केहि रणनीतिहरु जोड्न सक्छन्. उदाहरणका लागि, तिनीहरूले स्क्रैप गर्न यूआरएलहरूको सूची सिर्जना गर्न र त्यसपछि परिणामहरू मार्फत पग्न सक्छ.